Ukwazi njani ukuba umntwana wam ukhathaza into | Oomama Namhlanje
Ukwazi njani ukuba umntwana wam ukhathaza into
UAlicia tomero | 06/06/2021 10:00 | Umntwana, Intsapho
'Ungazi njani ukuba umntwana wakho ukhathaza into' Lolunye uloyiko olunokukhathaza abazali, ngakumbi abazali abatsha. Ngokubanzi uloyiko olukhulu kukungakwazi ukuqonda ukuba iimpawu ezinokuvezwa lusana luhlobo oluthile lwesifo esibi.
Usana lumele iimvakalelo zalo ngokulila kwaye oku kungabhideka kumaxesha amaninzi, kuba asihlukanisi ngokwenyani ukuba luhlobo oluthile lwemfuno oluyimfuneko okanye olucaphukisa ngokwenene uhlobo oluthile lwentlungu. Nini isikhalo siyaphindaphindwa, asiyeki kwaye zikhatshwa zezinye iintlobo zeempawu, apho unokufumana ithuba lokucaphuka ngento enzulu.
1 Ndiyazi njani ukuba umntwana wam ukhathaza into?
1.4 Ubuhlungu bendlebe
1.5 Ukungonwabi kwamazinyo
1.6 Ukuzama ukwazi unobangela weentlungu
Ndiyazi njani ukuba umntwana wam ukhathaza into?
Kukho amabinzana amaninzi okanye iimpawu ezinokuthi ziboniswe ngesikhonkwane okanye isililo. Isenokuba sisikhalo esiqhelekileyo kuba sikhatshwa ziimfuno zabo ezisisiseko kwaye bayimela phi loo nto umntwana uyozela okanye ulambile.
Kodwa nini ukukhala akulawuleki kwaye kuhamba nezimbo zomzimba njengokukhama amehlo kakhulu, ukuvula umlomo ubanzi, ukushwabana kwempumlo xa ulila okanye uthotywa uzobe amashiya; kuxa kufuneka sibonile ukuba umntwana uphethwe yinto ethile kukubangela ungonwabi okanye iintlungu. Ukulungiselela le nto, iintlobo ezixhaphakileyo zezifo ezinokuzibonakalisa zikhethiwe, ukuze uthelekise indlela yabo yokukhala:
Olu hlobo lwesifo luqheleke kakhulu kwiinyanga zokuqala zobomi kwiintsana. Ikhatshwa ngu ukungonwabisi kwinkqubo yakho yokwetyisa ayikavuthwa, phi Iigesi ziveliswa okanye zibizwa Colic. Ukuyifumana, umntwana uya kulila ngokubonisa iintlungu, abambe amanqindi kunye neentshiya. Ukuba uchukumisa isisu sakhe uyakuva ukuba sidumbile kwanaxa kubuhlungu, ungamjonga ephakamisa kwaye ecofa imilenze.
Olunye uhlobo lokucaphuka. Kuyaqatshelwa ukuba umntwana khange uveze isitulo sakho iintsuku ezininzi kwaye kwezi ntsuku zilandelayo uqala ukuba nomsindo. Irhasi yakho iya kubonakala inyuka kwaye uyakhathazeka xa ufuna ukuba nokuhamba kwamathumbu.
Ukukhawuleza kwe-diaper kubangelwa yi ukudumba kunye nokucaphuka kwindawo ye-butt, Ibonakala ngamaqhakuva kwaye indawo ibonakala ibomvu kakhulu. Ukuqunjelwa i-diaper kuya kumenza umntwana angakhululeki kwaye khala ngokukhathazeka kunye nentlungu. Kule meko, kufuneka uye kugqirha wabantwana ukumisela ukhilimu okhethekileyo wokunyanga kunye nokuwukhulula.
I-Earache ivela ngengqele kwaye iyintlungu engathandekiyo emntwaneni imele ngesikhalo esikhulu esingayekiyo. Iimpawu ezinokuthi zinxulunyaniswe nobukho bomkhuhlane, kuba ngokuqinisekileyo lukhona usulelo. Ukongeza, umntwana uya kuzama ukuyichukumisa indawo njengophawu lokuba kubuhlungu.
Uninzi lwabantwana luziva lungonwabanga kwasekuqaleni. Ihlala ivela phakathi kweenyanga ezi-4 ukuya kwezi-7 kwaye kunokuba yinto engathandekiyo xa uqala ukwaphula izinyo leentsini. Se kudala ukucaphuka okuninzi kwaye kwezinye iimeko kubonakala ifivaUkongeza, ukuba umntwana unokuzisa izinto emlonyeni wakhe, uya kuyenza rhoqo ngakumbi kwaye uya kuzama ukumluma ngomsindo.
Ukuzama ukwazi unobangela weentlungu
Zama bazi imiphumo yokulila kwabo, njengoko zinokudityaniswa nohlobo lwentlungu njengoko sibonisile. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuhlalutya iinkcukacha kunye yenza uhlolo kunye novavanyo lomzimba wakho. Sinokukhulula umntwana ukuba ahlole umzimba wakhe akafumananga uhlobo oluthile lwesibetho. Xa ungathandabuzeki, unokucofa kancinci indawo okrokrela kuyo kwaye ubone ukuba iyakukhathaza na. Ungasicofa nje kancinci isisu sakhe kwaye ubone ukuba siyamkhathaza na xa umchukumisa, mhlawumbi kungenxa yokuba uqunjelwe sisisu okanye unegesi eninzi.
Enye indlela yokwazi ukuba unesifo sendlebe kukubona ukuba zombini iindlebe zibomvu kwaye ukuchukumisa ngaphandle nangaphandle kwendlebe kwenza umntwana akhathazeke. Kubalulekile ukuthatha ubushushu bomntwana kwaye ukuba unefiva yiya kwagqirha uhlolo.
Phantse zonke ezi zinto zicaphukisayo badla ngokuya emayezeni njenge-ibuprofen yokunciphisa iintlungu eziphakathi ukuya kweziphakathi, kubandakanya nomkhuhlane. Ukuba umntwana ungaphantsi kweminyaka emibini ubudala, kuya kufuneka usoloko uye kugqirha wabantwana usixelele esona sisombululo sisiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Ukwazi njani ukuba umntwana wam ukhathaza into
Ukwazi njani ukuba umntwana wam uphefumla kakuhle
Ukubeleka, ungalifumana njani ixesha lakho